भारतले लिपुलेकमा निर्माण गरेको सडक विरुद्ध ओली र प्रचण्डको संयुक्त वक्तव्य
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा गरिरहेको सडक नि...
नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई नेपाल सरकारकाे आग्रह
काठमाडौँ । सरकारले भारतीय गतिविधिबारे आधिकारी धारणा प्रस्तुत गरेको छ । शनिवार एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडक खनेर चीनको सीमासम्म पुर्‍याएको विषयमा सरकारले आधिकारिक धारण...
काठमाडौँ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै मानसरोवर जाने बाटो बनाएको विरोधमा उत्रेका सत्तारूढ दल नेकपा निकटअनेरास्ववियूका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । शुक्रवार भारतीय गृहमन्त्री राजन...
तत्काल कूटनीतिक पहल गरेर सरकारले नेपाली भूमि सुरक्षित गर्नु पर्दछ : अध्यक्ष राणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले लिपुलेक मिचिएको बारेमा सरकार बेखबर रहनु आश्चर्यजनक र सन्देहपूर्ण रहेको बताएका छन् । नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी सडक न...
स्थानीयतहको कोरोना कोषमा प्याब्सनको सहयोग
भक्तपुर । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) भक्तपुरका विभिन्न समितिले स्थानीय तहलाई खाद्यान्नदेखि नगदसमेत सहयोग गरेका छन् । प्याब्सन मध्यपुरथिमि नगर कार्यसमितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१...
एक चौथाई कर्मचारीका साथ आइतबारदेखी सरकारी कार्यालय खोलिने
काठमाडौं । आइतबार देखी सरकारी कार्यालयको कामकाज हुने भएको छ । कोरोना भाइरस महामारी प्रभावका कारण सरकारी कर्मचारीहरु घरमा बसिरहेका छन । कार्यालयको काम काज ठप्प हुँदा कयौं सरकारी कामकाज प्रभावित बनिरह...
सांसदलाई पिसिआर परीक्षण अनि सङ्क्रमित क्षेत्रका जनतालाई आरडिटी मात्र ? शेखर कोइराला
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कोरोना सङ्क्रमित क्षेत्रका नागरिकहरूले पिसिआर परीक्षण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । संसद्को वर्षे अधिवेशनमा सङ्घीय सा...
गाँजा बरामद गरेपछि प्रहरी र स्थानीयबीच झडप, ३ प्रहरी घाइते
चितवन । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका-५ चौकीडाँडामा गएराती प्रहरीले १ राउण्ड हवाईफायर गरेको छ । राप्ती नगरपालिका-१२ बाट ३४ केजी गाँजा बरामद गरेर ल्याउँदै गर्दा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि हवाईफायर गर...
भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले तु कदम चालोस्: प्रवक्ता श्रेष्ठ
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय अतिक्रमणबारे विरोध जनाएका छन् । विश्व कोरोना महामारी सङ्कटले गुज्रिरहेको अवस्थाम...
थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १ सय ९ पुग्यो
नेपालमा थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार उदयपुर भुल्केका १८, ४५, ६५ वर्षका महिला, कपिलवस्तुका १७ र १८/१८ वर्षीय पुरुष र पर्सा छपकैयाका ६३ वर्षीय प...
सरकारले के गर्न सक्छ ? गुण्डा लगाएर अपहरण गर्छ: सांसद महतो
काठमाडौं । सांसद राजेन्द्र महतोले सरकार प्रति आक्राेश व्यक्त गरेका छन। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद महतोले दुई तिहाईको सरकारले दुई कोडीको काम नगरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘आज मै...
कोरोना परिस्थिति विश्लेषण गर्दै, गम्भीर रुपले अघि बढौं : सभापति देउवा
काठमाडाैं ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले काेराेना भाइरस महामारीकाे संकटलाई विश्लेषण गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा जाेड दिएका छन । सभापति देउवाले विपक्षी लगायत राजनीतिक द...
संसदकाे वर्षे अधिवेशन शुरु(लाइभ)
काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको छैठौं अधिवेशन शुक्रबार दिनको ४बजेबाट शुरू भएकाे छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्व...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकाेटाबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार अपरान्ह चार बजे बस्ने संसदको वर्षे अधिवेशनबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति र सभामुखबीच भेटवार्ता भएको ...
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो रा...
६ जना कोरोना संक्रमित उपचारपश्चात घर फर्किए
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित जना उपचार पश्चात घर फर्किएका छन । शुक्रबार काेसी अस्पतालमा उपचारार्थ जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका हुन । कोसी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ८ जनाको पछिल्...
अवैध लागूऔषध गाँजा सहित दुई जना पक्राउ
सर्लाही । लालवन्दी नगरपालिका-१५ बाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब ५ किलो सहित दुई जनालाई बिहीबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सोही नगरपालिका-८ बस्ने २६ वर्षीय मोहन घिसिङ र ईश्वरपुर नग...
एसईई खारेज गरी परीक्षाविना नै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने माग
काठमाडौं । संसदीय समितिम एसईई परीक्षा खारेज गर्दै विदयार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र दिन आवाज उठाएको छ । गत चैत ६ गतेबाट हुने भनिएको एसइई परीक्षा कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण अनिश्चतकालिन स्थगन भएपछि...
एजेन्सी । भारतकाे महाराष्ट्रमा आज (शुक्रवार) बिहान एक दर्दनाक दुर्घटना भएको छ। घर जान हिँडेका १५ प्रवासी मजदुरहरूलाई एउटा रेलमा ठक्कर दिएकाे छ। घटना मुम्बईबाट ३६० किलोमिटर टाढा, औरंगाबाद जिल्लाको करा...
आजबाट संसदको वर्षे अधिवेशन शुरू हुँदै
काठमाडौं । संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन आजबाट शुरु हुँदैछ । कोरोना भाइरस संक्रमणकाबीच संसद अधिबेशन शुरु हुन लागेको हो ।बैठक अपरान्ह ४ बजे बोलाइएको छ । संघीय संसदका सांसदहरुलाई विशेष सावधानीका सहित उनी...